Iindaba-Inkampani yethu iyakuthatha inxaxheba kwi-R + T Curtain Exhibition
Ngophuhliso oluqhubekayo lwenkampani, abathengi bethu bayaqhubeka nokwanda. Ngo-2019, isikali sethu semveliso yocweyo sandiswa ukusuka kwi-6000 yeemitha zesikwere ukuya kwi-15000 yezikwere. Kwangelo xesha, songeze izixhobo zemveliso ezintsha. Olu tyalo-mali luya kusinceda kubaxumi bethu. Ukubonelela ngenkonzo engcono.